Eminyakeni yamuva, izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba imidlalo ibhodi uhlangabezana boom yangempela. Omunye izinhlobo ethandwa kakhulu kukhona collectible ikhadi imidlalo. Njengomthetho, ngasinye salezi imidlalo ingadlalwa in takhiwo ezimbili: Esakhiwe futhi Okusalungiswa. Qonda ukuthi lokhu okusalungiswa, futhi kuhluke kanjani Esakhiwe elula. Ake sibheka amaphuzu ayinhloko.
Esakhiwe futhi Okusalungiswa. Uyini umehluko?
Gameplay nganoma iyiphi umdlalo ukuhweba ikhadi kuhilela ukusetshenziswa ngendlela ethile eqoqwe emphemeni. Ukudlala tournaments Esakhiwe zisebenzisa emphemeni pre-ababebuthene zamakhadi okuyiwona ungakwazi ukuthenga eceleni noma ngempahla kusukela nabanye abadlali. Kodwa ukuze siqonde lokho okusalungiswa, vula ngqo incazelo yegama elithi. Uma lihunyushelwe olimini Russian Igama lesiNgisi elisho "okusalungiswa", sizofika akukho okunye ngokuthi "okusalungiswa" noma "indaba emfushane". Lokho kuyingxenye emphemeni eningalicabangi ngokusebenzisa kusengaphambili ekhaya, futhi alethe ngqo kulo mqhudelwano.
Isimiso jikelele umtlamo umncintiswano
Ngo imidlalo kakhulu, umtlamo tournaments aphethwe cishe elilodwa futhi isikimu efanayo. Okokuqala, siphawula ukuthi lo mqhudelwano ihlukaniswe izigaba ezimbili: yokufuna emphemeni futhi lo mdlalo ngaphandle. Ukuze uqale lokuqoqa amakhadi emphemeni, abadlali ngokuvamile ibekwe etafuleni elifanayo e nenani abantu 6-8. Ngamunye wabo usezuze iphakethe amabalazwe. Inombolo amaphakethe kanye nokwakheka kwazo kuxhomeke ngqo umdlalo. Ngokwesibonelo, e-ethandwa kakhulu game card Magic: Ukuhlangana umdlali ngamunye kudingeka amakhadi ezintathu pack of izingcezu 15 ngamunye. Ngemva Lithatha abadlali evulekile kwenye lenqwaba, ngcono it is ezikhethiwe kusuka kumephu, futhi okusele circularly sokudlulisa umakhelwane. Ngakho, eminye ukukhetha ikhadi kusuka ukuthi umakhelwane belambatha, nokunye kuze wonke amakhadi kungukuthi adiliza.
Phela amaphakethe ezivuliwe futhi adiliza, ekubhaleni imidlalo ikhadi akugcini lapho. Kuyadingeka kusukela isethi umphumela namakhadi umdlalo ukuqoqa emphemeni ngendlela eyiyo. Njengomthetho, emva inqubo "razdrafta" ikhadi umdlali kuyoba ngaphezu ezidingekayo ukukhiqiza emphemeni, ngakho udinga ukukhetha okungcono bese uzisebenzisa ukwakha kokuyidlala.
Izinzuzo eyinkimbinkimbi Pick
abadlali abaningi bayazi tentatively kakhulu, ukuthi lokhu okusalungiswa. Yiqiniso, iningi uyazi imithetho, kodwa iphuzu lapha lihlukile. ukukhetha format kudinga umdlali amakhono kuyiwa kuka Esakhiwe. Okokuqala, kumelwe ufunde indlela ukuhlola amandla amakhadi, kanye nokuxhumana yabo nomunye. Akukhona njalo ngokwanele ukuthatha ikhadi esiqine uyifake emphemeni. Ngezinye izikhathi ikhadi ababuthakathaka kungaba emphemeni ethile "esikhaleni nje" sinamandla kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, kubalulekile ukuqaphela ukuthi amakhadi uphase omakhelwane, ukuba balungele midlalo yabenza emphemeni futhi ube izimpendulo izinsongo kunokwenzeka.
Beginners futhi okusalungiswa
Kusukela iphuzu Ngenxa usaqala, kunzima ukusho ukuthi iyiphi format kuyaphumelela ukufunda yonke butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela umdlalo. Mhlawumbe uqale ukufunda imithetho kanye Mechanics eziyisisekelo umdlalo nge ezifanelekayo Esakhiwe, bese uqhubekela wafunda ngalokho okushiwo okusalungiswa. Inani elanele imidlalo wadlala Esakhiwe uvumele ukwenza okungenani umbono sokuqala amandla amabalazwe ukuqhubekisela phambili umdlali baba nethuba ukwenza okulungile futhi ukukhetha ukwaziswa isethi edalulwa. Ngaphezu kwalokho, ngenxa okusalungiswa kule midlalo, kufanele ube abantu okungenani 6-8, futhi nje ukulungele ukudlala emphemeni, unga ngisho nomngane ekhishini.
Manje unalo ulwazi jikelele lokho okusalungiswa. Amakhadi aziwa kakhulu ithonya inhlanhla, futhi collectible imidlalo ikhadi nabo bayajabula. Nokho, okuhlangenwe nakho kanye nomsebenzi izinga umdlalo kuzokuvumela ukuba anqobe izimbangi elitheni kunoma iyiphi ezihlukahlukene tournaments.